Shariif Xasan oo Saaka si weyn loogu soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha Muqdisho | Calanka Somalia
← Faroole & Siilaanyo
Inta badan Shaqaalihii Madaxtooyada Soomaaliya oo is Casilay”Xog la helay”. →
Shariif Xasan oo Saaka si weyn loogu soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha Muqdisho
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo 13-kii bishii Disembar xildhibaanada baarlamaanka ka qaadeen xilka afhayeenka baarlamaanka ayaa maata dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ka dib markii uu ka soo qeybgalay shirkii Kooxda Xiriirka ee Arimaha Soomaaliya ee ka dhacay wadanka Jabuuti.
Wuxuu Shariif Xasan sidoo kale sheegay in shirkii kooxda Xiriirka ee IG ku yeesheen Jabuuti ee uu isagu ka qeybgalay looga hadlay amaanka Soomaaluiya iyo sidii dawladnimo loo gaarsiin lahaa dalka, isagoo sheegay.
Guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo saxaafada kula hadlaayay saaka oo jimco ah garoonka diyaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka dib markii uu dib ugu soo laabtay muqdisho ayaa sheegay qarixii arbacadii ka dhacay in ahaa mid dad aan waxbo galabsan lagu waxyeeleeyay.
Wuxuu sheegay Al-Shabaab in aysan wax dan u heynin shacabka iyo dalka Soomaaliya.
Wuxuu yiri ” Al-Shabaab waa kuwii hadda cadeystay in ay qeyb ka yihiin Al-Qaacida marka waxa aan ugu baaqayaa shacabka ku nool muqdisho in ay iska celiyaan kooxdaas imaan lawaayaasha” sida uu hadalka u dhigay.